Eyona arhente yoyilo edumileyo eSpain | Creatives Online
Xa ufuna ii-arhente zoyilo, into oyifunayo kukuba ukwazi ukubala kwezona zibalaseleyo ukuze uqiniseke ukuba ziya kwenza umsebenzi olungileyo. Ke ngoko, xa ukhangela umntu oza kusebenza naye, okanye ujonge umsebenzi ukuba ungumyili, injongo yakho yeyona ibalaseleyo kwabali-10 abaphezulu elizweni.
Kodwa, Ngoobani ezona arhente zoyilo zibalaseleyo nezaziwayo eSpain? Ngaba ukho nanye kuzo oyaziyo? Ngaba lusukelo lwakho ukusebenza apho okanye ukusebenza nabo? Siyabazi ngakumbi.
3 I-ROIncrease, enye yeyona arhente yoyilo lwewebhu ebekekileyo
4 Uphawu lohlobo
5 Iyogathi yestrawberry
6 UJohn appleman
7 Umba ongwevu
11 I-ninja yamehlo akho
Sinokuthi iNeoattack ngoku yenye yezona arhente zibalaseleyo zoyilo eSpain, idume kakhulu kwaye nodumo lwayo luyayixhasa.
Kwakunjalo eyenziwe nguJesús Madurga ngo-2014 kwaye ngoku inabasebenzi abangaphezu kwama-60 kwaye iyaqhubeka ikhula. Ukongeza, igxininisa into yokuba ayikho eSpain kuphela, kodwa ineofisi eColombia naseMexico.
EyaseSpain iseMadrid. Nangona kunjalo, ayinikezelwanga kuphela kwaye ikhethekileyo kuyilo lwegraphic, kodwa iyenza nakwintengiso, oko kukuthi, inikezela ngeenkonzo zokubeka indawo, intengiso, ukuthengisa kwaye, ngokuqinisekileyo, uyilo lwewebhu (ngaphakathi koku, iivenkile ze-intanethi kunye neefunnels zokuthengisa).
Enye yeearhente zoyilo ezidumileyo eSpain yiAppyweb. Kodwa, njengoko kwakunjalo ngaphambili, Bazibhengeza njenge-arhente yokuthengisa kwi-intanethi, enikezela ngeendawo, ukuguqulwa, njl. njl.
Kwaye uyilo lwegraphic? Kwakhona. Ngokukodwa, banikezela ngomsebenzi woyilo lomfanekiso wenkampani, umhleli, amaphulo entengiso, uyilo lwewebhu kunye ne-UX / UI (amava omsebenzisi okanye uyilo lwangoku).
Uneminyaka engaphezu kwe-10 yamava emva kwakhe kwaye yenye yezona zibalaseleyo eSpain.
I-ROIncrease, enye yeyona arhente yoyilo lwewebhu ebekekileyo
Masihambe nomnye umzekelo wee-arhente zoyilo. Kule meko, ibekwe eMadrid kwaye kungekuphela nje ngoyilo lwegraphic kunye neenkonzo zoyilo lwewebhu, kodwa njenge-arhente ye-SEO, imidiya yoluntu, intengiso, intengiso yangaphakathi ...
El Iqela lenkampani liqeqeshwe kwintengiso yedijithali kunye nendlela ekhethekileyo, «I-MRI» ekhonza ukufumana imbuyekezo ephezulu evela kumaphulo (ngoko igama le-arhente lihambelana naloo ROI, oko kukuthi, ukubuyiswa kotyalo-mali).
Kule meko, indlela yokusebenza kunye noyilo lomzobo ingokwemveli kunye neklasiki kuneyanamhlanje, oko kunokuthetha ukuba, ukuba ukhangele into engaphezulu komhlaba, kufuneka usebenze ngokucokisekileyo kunye nabo.
Ikwafumaneka eMadrid, iyabonelela iinkonzo zoyilo olulodwa lwegraphic, ukusuka kwisicwangciso sophawu ukuya ekupakishweni, uyilo lokuhlela, ukuyila kwi-intanethi, uyilo lojongano, uphicotho-zincwadi ...
Bebekweli candelo iminyaka engaphezu kwe-15 kwaye sinokuthi yenye yeenkampani ezigxile kuyilo lwegraphic, ukongeza ekudumeni kakhulu ngakumbi kuphuhliso lwewebhu, umzekeliso ...
Musa ukoyika ngephepha elinalo, okanye ngento yokuba ividiyo ayinakubonwa. Ngamaxesha athile, Xa i-arhente inomsebenzi omninzi, inokulibala ukujonga ukuba iwebhusayithi yayo isexesheni kwaye ayiniki bugs.
Inyani yeyokuba iStrawberry Yogurt sisitudiyo sokuyila imizobo esiseValencia esophula izithethe zakwantu. Yeyangoku, ivelisa izinto ezintsha, iyile, njl.njl. Ifuna ukufikelela kuluntu lwangoku ngokuzama izinto ezisebenzayo namhlanje, hayi kangako njengesiqhelo, kodwa ijonge into eqhuma ngakumbi.
Yintoni oyincutshe kuyo? Ungene kakuhle uyilo lwegraphic, iividiyo ezisebenzisanayo, iimagazini zedijithali, ii-apps, amaphepha ewebhu kunye ne-audiovisual.
Nika imizekelo yento eyenzileyo ukuze uhlale unolwazi. Ngapha koko, ngo-2021 yaphumelela imbasa yeCliment yeyona ncwadi ibalaseleyo.
Ukuba le nto uyikhangelayo yi-arhente yoyilo lwegraphic egxile kuphawu olukwinqanaba eliphezulu, oko kukuthi, kwiimpawu eziqinileyo ezijonge ubukho obuqinileyo, ke bheja kule.
Ifumaneka eMadrid kwaye ineminyaka eyi-12 yamava. Abathengi babo abayonto nje, sithetha ngeYamaha, Behance ...
Ngaphandle koyilo lwegraphic kunye nophawu, ikwabonelela ngoyilo lwewebhu kunye nokuthengisa kwi-intanethi, indlela yokuvula kwaye ube neenkonzo ezininzi kubathengi bayo.
Kule meko, le yi-arhente yoyilo evelele kuzo zonke esizibonileyo (kunye nezo siza kuzibona). Kwaye yiloo nto Ijolise kuhlobo lwecandelo kunye nabaxumi: ii-NGO, iziseko zoluntu, kunye neeprojekthi zentlalo.
Asikuko ukuba basebenza kunye nabo kuphela, kodwa indlela yokusebenza kunye neziphumo abazinikayo zijoliswe ngakumbi ngelo xesha lemibutho kunye nemibutho. Njengabanye, abagcini nje ngokunikezela ngoyilo lwegraphic, kodwa kunye nokuthengisa.
I-Baud yenye yezona arhente zentengiso zedijithali zikazwelonke nezamazwe ngamazwe, ezigxile ngakumbi kwi-eCommerce. Nangona i-arhente yokuthengisa yedijithali, inecandelo loyilo lwegraphic nto leyo igqamayo, kuba baziingcali kwi-branding kunye nezinye iinkonzo zoyilo.
'Irhamncwa elimnyama' ukuba siguqulela igama lale arhente. Ayisiyiyo i-arhente yoyilo lwegraphic ekhethekileyo, kodwa ibonelela ngeenkonzo zokuthengisa kwi-intanethi apho obu bukhethekileyo bufunyanwa khona.
Yintoni eyenza ilunge? Kulungile ukuba amaxabiso awabizi kakhulu, njengoko bezama ukufaka iprojekthi nganye kangangoko kunokwenzeka ukuba baphumeze ngaphandle kokulahlekelwa ngumgangatho okanye banganikeli ngqalelo kumsebenzi okhoyo.
Ifumaneka eMadrid, njengee-arhente ezininzi.
Kule meko siya eCuenca, apho sine-Alquimia, enye ye-graphic design kunye nee-arhente zentengiso ezivelele kakhulu, kungekhona kuphela kuloo ndawo, kodwa kuyo yonke iSpeyin.
Eyona nto ibonakalisa kakhulu inkampani kukuba bafuna ukulula kwinto abayenzayo, kuba bebheja "kwi-minimalism" ukwenza kube lula ukukhumbula ilogo, umyalezo, njl.
I-ninja yamehlo akho
Ngaba ufuna i-arhente leyo yangoku, iyilo kwaye idibanisa uyilo kunye ne-audiovisuals kunye neziganeko? Ewe, oku kunokuba yinto efanelekileyo yokukhetha. Iyanda ngakumbi kwaye iyabonisa.
Ifumaneka eMadrid kwaye yenziwe liqela elisebenze kwii-arhente ezahlukeneyo kwaye ngoku bajoyine.
Zininzi ii-arhente zoyilo ezaziwayo eSpain. Ngaba ukhe wasebenza kuyo nayiphi na? Ngaba unazo ezinye iireferensi? Zishiye kwizimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Eyona arhente yoyilo edumileyo eSpain